11 Qodob oo ay tahay in Milkiilayaasha Mareegta ay Cusbooneysiiyaan Xiliga Dhibaatada | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/11 shay oo ay tahay in mulkiilayaasha mareegaha ay cusbooneysiiyaan inta lagu jiro xiisadda
11 shay oo ay tahay in mulkiilayaasha mareegaha ay cusbooneysiiyaan inta lagu jiro xiisadda
Waxaa laga yaabaa 7, 2020
Tan iyo markii dhibaatada coronavirus ku dhufatay, waxay mararka qaarkood dareemi kartaa inay saamaysay meel kasta oo nolosheenna ah. Qof kasta oo hadda caruur guri wax ku baraya ama si lama filaan ah waqti badan ku bixiya shoolad kulul ayaa taas u dammaanad qaadaya! Dabcan, taasi waxaa ku jira ganacsiga sidoo kale, iyo haddii aad tahay milkiile ganacsi, waxaa jirta fursad wanaagsan run ahaantii waxaad dareentay saamayntaas.
"13-kii sano ee aan ahaa mulkiilaha wakaalad suuq-geyneed, weligay kuma riyoon wakhtigan, marka aniga iyo kooxdayda aanu caawinayno boqolaal ganacsiyada yaryar ee halganka ku jira si aan u fahanno sida ugu wanaagsan ee loo suuqgeeyo loona wada xiriiro hadda si loo badbaadiyo ganacsigooda," ayay tiri Wendy O'Donovan. Phillips, maamulaha guud Buzz weyn.
"Dib u qiimee bayaanka aragtidaada si aad diirada u saarto dadaalka kooxda inta lagu jiro wakhtigan," ayay ku talisay. Dib u eeg falanqayntaada SWOT (xoogga, daciifnimada, fursadaha, hanjabaadaha) adoo si gaar ah diiradda u saaraya fursadaha. Macaamiishaada iyo bulshadaadu hadda waxay leeyihiin baahiyo ka duwan sidii ay qabeen xataa bil ka hor waxayna yeelan doonaan baahiyo kala duwan bil kale gudaheed. Habkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad si sahal ah u garaacdo dakhligaaga iyo saadaalinta faa'iidada. Qaado tallaabada saxda ah, waadna badbaadi doontaa!”
Waa waqtigii la abuuri lahaa qorshe maarayn xasaradaha. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan doonto inaad wax ka qabato milkiile ganacsi yar ahaan waa cusboonaysiinta boggaaga iyo kanaalada warbaahinta bulshada.
Si ganacsigaaga yar uu kor ugu kaco, waxaanu aqoonsanay 11 shay oo ay tahay in mulkiilayaasha mareegaha ay cusbooneysiiyaan inta lagu jiro xiisadda. Aan quusno.
Relacionado: 11 siyaabood oo ay ganacsiyada yaryar u kicin karaan si ay uga badbaadaan dhibaatada
Sida Loo Cusbooneysiiyo Mareegahaaga Inta Lagu Jiro Dhibaato
1. Samee bog cusub oo degitaan ah.
Marka ay dadku booqdaan mareegahaaga, boggaaga guri waxay u badan tahay waxa ugu horreeya ee ay arki doonaan. Taasi waa sababta ka dhigista mid cusub ay had iyo jeer muhiim u tahay, laakiin marka ay jiraan waxyaabo isbeddelaya inta lagu jiro xiisadda, taas ayaa ka sii muhiimsan.
Si aad u muujiso in meheraddaadu ay kubbadda ku jirto oo aad la socoto, waxaad rabi doontaa samee bog deg deg ah waxyaabaha ku saabsan dhibaatada. Hubi inaad beddesho bogga marar badan, gaar ahaan marka macluumaad cusub la sii daayo ama siyaasadaha horumarsan yihiin. Haddii kuwani saameeyaan ganacsigaaga, sharax sida aad u fulin doonto wax kasta oo cusub iyo sida taasi u saamayn doonto macaamiisha. Mar kasta oo aad cusbooneysiiso, waxaad ku faafin kartaa ereyga warbaahinta bulshada adiga oo wadaagaya xiriiriyaha.
Sababta kale ee aad u sii wadi karto cusbooneysiinta boggaaga degitaanka ayaa ah in makiinadaha raadinta ay aqoonsan doonaan inay tahay bogga muhiimka ah ee goobtaada dhibaatada, taas oo kor u qaadi doonta SEO.
Relacionado: Sida Loo Dhiso Bogag Soo Degista Leedhka ee WordPress
2. Cusbooneysii boggaga FAQ.
Haddi aanad weli ku lahayn qayb FAQ ah website-kaaga ganacsiga, waa waqtigii aad ku dari lahayd mid! Qalalaasaha COVID-19 waa is beddelaa maalin kasta, marka qaybta FAQ waa meel fiican oo wax looga qabto taas laguna wadaago wixii ku soo kordha. Ganacsiyada maxalliga ahi waxay si gaar ah ugu baahan yihiin inay ka jawaabaan su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan maaraynta dhibaatooyinka iyo sida shirkaddaadu ula qabsanayso xannibaadaha COVID-19 awgeed.
Si loo hubiyo in macaamiishu ay ka warqabaan qaybtaada FAQ, waxaad ku iftiimin kartaa isku xirka boggaaga. Sii wad inaad ku darto macluumaadka khuseeya boggaga FAQ, sida sida aad u ilaalinayso badbaadada shaqaalaha, kuwaas oo la soo xidhiidha alaabtaada, iyo siyaasada isbedelada, tusaale ahaan.
Qaybta FAQ sidoo kale waa fursad lagu wadaago isbeddel kasta oo ku yimaadda silsiladaada saadka, wax bixinta ama dib u dhacyada buuxinta alaabta.
"Mar walba hubi inaad haysato agabka saxda ah si aad diyaar ugu ahaato," ayuu yidhi Bob Minhas, Aasaasaha iyo Tababaraha hogaanka eSchool ee ganacsatada. "Haddii ay tahay dukumeenti ama muuqaalo, ku dhex soco safarkaaga macmiilka oo fahan waxa laga yaabo inay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay kuugu dhammaystiraan wax kala beddelashada onlayn oo ay u helaan FAQ saxda ah iyaga."
Lasoco Boggaga Wax cusub
Tiknoolajiyadu si joogto ah ayay hore ugu socotaa oo la socoshada waxay noqon kartaa hawl adag. Waxaan dib u cusboonaysiin doonaa software-kaaga gaboobay, ee aan sugnayn si aanu kuugu soo celino wadada saxda ah.
3. Beddel liiskaaga/navigation-kaaga.
Si aad u fududayso in la helo macluumaadkaaga dhibka, waxa fiican in aad ku darto xidhiidhiyahaaga ugu muhiimsan ama bar digniin ah oo ku fadhida meel ka saraysa socodka boggaga degitaanka dhibaatada. Hubi inaad ka dhigto ciwaanka sheyga cusub ee hagidda mid gaaban.
Waxaa dheer, iyada oo aan loo eegin heerka ay taagan tahay xaalad qalalaase, had iyo jeer waa fikrad wanaagsan inaad cusboonaysiiso socodkaaga si aad u ilaaliso wakhtigeeda oo ku habboonaato, taas oo qayb ka noqon doonta Istaraatiijiyada dhaqamada ugu wanaagsan ee shabakadaada.
4. Dib u eeg sharaxaadaha alaabtaada.
Waxbixinahaagu sinaba ma isu beddeleen tan iyo markii ay dhibaatadu bilaabatay? Markaas waxaad u baahan doontaa in website-kaagu ka tarjumayo taas. U beddel qoraalka si habboon oo ku dar macluumaadka helitaanka shayga dhejinta.
"Ganacsado badan oo yaryar oo aan la shaqeyno waxay raadinayaan inay ku daraan adeegyo ama alaabooyin cusub oo kaabaya oo xiiso u leh dhagaystayaasha ay ka dhisteen khadka iyo macaamiishii hore," ayuu yidhi Chris Sica, Madaxa Dakhliga, Bulshada Ronin. "Waxaan ku dhiirigelinaynaa milkiilayaasha ganacsiga inay galaan kabaha macaamiishooda, ka fikiraan safarrada cusub ee wax iibsiga ee ay ku socon doonaan, dhibcooyinka xanuunka cusub ee ay la kulmi doonaan oo ay isku dayaan inay xalliyaan kuwa isticmaalaya agabkii ay hore u heli jireen."
Relacionado: Sida Loo Qoro Sharaxaada Alaabta Dhabta Iibinta
5. Hubi bogga dhacdooyinkaaga.
Haddii aad ganacsigu wuxuu martigeliyaa dhacdooyinka nooc kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso warar cusub oo ku saabsan sida jadwalku isu beddelay, oo ay ku jiraan haddii la kansalay, dib loo dhigay ama ay si toos ah u socdaan.
Si looga fogaado jahawareer, sii wad inaad taxdo taariikhda dhacdada asalka ah si ay macaamiishu u xaqiijiyaan dhacdada. Dhacdooyinka qof ahaan laga beddelay oo dhijitaalka ah, hubi inaad ku xidhid goobta farsamada si fudud loo galo.
Relacionado: 20 Siyadood oo Lagu Joogo Bulsheedka Da'da Kala Fogaanshaha Bulshada
6. Samee halyey bogga guriga.
Inta lagu jiro xiisadda, qof kastaa wuxuu isticmaali karaa war wanaagsan. Haddii aad dib u habaysay meheraddaada si ay u caawiso si kastaba, u fududayso macaamiisha inay ogaadaan adiga oo cusboonaysiinaya boggaaga. Tusaale ahaan, haddii aad hadda samaynayso qaadis ama keenid, hubi inaad faafiso ereyga.
"Doorashada gaarsiinta gabi ahaanba waa lama huraan hadda," Sica ayaa tiri. "Macaamiil badan ayaa wali raba inay ka baxaan guriga, ka soo qaadis dhinaceedku waxay siinaysaa xoogaa nasasho ah joogitaanka guriga. [Wax kale oo la balaadhiyo waa] ikhtiyaarada lacag bixinta si ay kuugu fududaato inaad awood u yeelato alaabtaada ama adeeggaaga."
7. Isticmaal boodhadhka ama boodhadhka.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee aad ku soo jiidan karto dareenka macaamiishaada oo aad u cusbooneysiin karto waa in aad ku dar pop-up ama banner. Waa hab sahlan oo lagu faafiyo ereyga saacadaha la dhimay, alaabada xaddidan, daahitaanka rarida ama isbeddelka helitaanka adeegga. Hubi in ay muuqaal ahaan soo jiidato dareenka dadka.
8. Dib u cusboonaysii liisaska maxalliga ah.
Haddii saacadahaagu isbeddeleen, dunidu waxay u baahan tahay inay ogaato. Hubi inaad cusboonaysiiso mareegahaaga Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso saacadaha iyo xidhidhiyaha ku meel gaadhka ah ee goobaha ay macaamiishu tagaan si ay u helaan saacadahaaga, sida Google My Business, Facebook iyo Yelp.
Relacionado: Abuur Istaraatiijiyad Suuqgeynta si aad kor ugu qaaddo Ganacsigaaga Deegaanka
9. Cusbooneysii fariimahaaga la qorsheeyay.
Haddii aad si joogto ah u soo dirto iimaylo horay loo qorsheeyay ama cusboonaysiinta warbaahinta bulshada, hubi inaad hagaajiso si ay ugu habboonaato xaaladda hadda jirta. Haddii kale, haddii aad dirto isla isgaadhsiin hore, waxay kaa dhigi kartaa mid dhega la' oo aanad xawaareyn.
"Macaamiishu waxay u caadaystaan ​​inay dukaankaaga yimaadaan, arkaan xayaysiisyadaada, ama wax kasta oo kanaalkaagu yahay jiidashada," Sica ayaa tiri. "Dhammaan waayo-aragnimadoodii isticmaale ee astaantaada waa laga saaray ama la beddelay. Cabsidooda iyo dhibcahooda xanuunka waa la beddelay. Natiijo ahaan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad maskaxda ku hayso si waxtar leh. Xalka ugu fudud ayaa ah in la abuuro ama la cusboonaysiiyo wargeysyadaada. Waxaan sidoo kale aragnay ganacsiyada u abuuraya sida loo sameeyo fiidiyowyada macaamiisha iyadoo lagu saleynayo bakhaarrada ama alaabada internetka ee ay jecel yihiin, waxaanan sidoo kale aragnay saacadaha farxadda macaamiisha. "
10. Beddel akoonnadaada warbaahinta bulshada.
Ugu yaraan, hubi in saacadahaaga shaqada, xidhidhiyaha, iyo helitaanka alaabtaada ay yihiin kuwo la cusboonaysiiyay inta uu jiro dillaaca coronavirus.
Kaliya si aad u noqoto dhinaca nabdoon, waxaa fiican inaad ku dhejiso wax ka badan hal mar kanaaladaada warbaahinta bulshada ee caadiga ah wixii ku saabsan isbedelada ganacsi, maadaama aan wada ognahay sida ugu dhakhsaha badan Tweet-ku u baabi'i karo gunta hoose ee quudinta Twitter. Tani waxay kordhinaysaa nasiibka ah in macaamiishu arki doonaan warka.
Relacionado: Sida loo horumariyo mareegahaaga Saamaynayaal
11. Kordhi xidhiidhka xasaradda.
Hubi in qof kastaa uu xawli ku socdo adiga oo ku soo diraya cusboonaysiinta iimaylka, qoraalada ama qoraalada blog-ka ula xiriir macaamiishaada sida ugu fiican.
"Waa muhiim inaad la xiriirto macaamiisha," ayuu yiri Jaryd P. Kase, Maamulaha Kase Consulting, LLC. "Marka hore, haddii aad furan tahay, macaamiishaadu ma ogaan karaan oo waa inay ogaadaan inaad furan tahay. Marka labaad, macaamiishaadu waxay la tacaalayaan dhibaatada adiga oo kale. Adiga oo la xidhiidha sida aad uga shaqaynayso si aad u yarayso arrimaha khatarta ah ee masiibada ah ama aad si adag uga shaqaynayso inaad u keento alaab ama adeeg weyn (ama ka soo qaado meesha aad kaga tagtay haddii aad xidhan tahay), waxay kaa caawinaysaa inay macmiilka u fududayso dukaanka ay jecel yihiin. ama alaab-qeybiye muhiim ah kama baxayo ganacsiga."
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira khad fiican oo u dhexeeya wada-xiriirka aad u badan iyo mid aad u yar. "Xidhiidhka macaamiisha waa in la cadhooday," ayay tiri Deborah S. Sweeney, maamulaha guud MyCorporation.com. "Waa muhiim inaadan si xad dhaaf ah ula xiriirin ama aad noqon mid iib ah-y. La wadaag macluumaadka si taxadar leh. La wadaag macluumaadka iyo macluumaadka, laakiin ha isku dayin inaad iibiso. wargeli oo wax baro.”
Raadinta Talooyin Shaqo Fog?
Haddii aad rabto inaad diirada saarto guriga ama aad kordhiso ka qaybgalka kooxda, waan ku caawin karnaa! Ku biir DreamHost Digest si aadan weligaa maqaal u seegin.
Kooxdaada Maareynta Dhibaatada
Faafida coronavirus - iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay - ayaa wax ku adkeynaya milkiilayaasha ganacsiga yaryar. DreamHost, waxaanu siinay guryaha dhijitaalka ah ganacsiyada yaryar in ka badan labaatan sano. Waqtigaas, waxaan barannay in ganacsatadu ay yihiin kuwo xariif ah, caqli badan, oo caqli badan. Waxaan aaminsanahay adiga iyo ganacsigaaga waxaanan u joognaa inaan ku caawino.
Waxaan qornay hagayaal ganacsi oo yaryar oo badan sannadihii la soo dhaafay - laga bilaabo dhisidda degel weyn ilaa abuurista istiraatiijiyad suuqgeyn dhijitaal ah. Si nuxurkan looga dhigo mid fudud in la isticmaalo, waxaanu ku soo ururinay dhamaan a bogga kheyraadka ganacsiga yaryar. Fadlan la soo xiriir Twitter or Facebook haddii ay jiraan mowduucyo kale oo yar-yar oo aad jeclaan lahayd inaan ka hadalno.
Haddii aad wado hawlgal leben-iyo-hoobiye ah oo aad u baahan tahay inaad dhisto mareeg markii ugu horreysay, eeg annaga hage in la sameeyo dukaan online ah saacad gudaheed. Our qorshayaasha martigelinta la wadaago (laga bilaabo kaliya $2.59/mo) waa hab la awoodi karo oo lagu galo ciyaarta e-commerce.
Horey ma u leedahay shabakad? Waxaan hadda bixinaa guuritaan WordPress ah oo bilaash ah si aad ugu gudbi karto DreamHost adoon dhib lahayn.
Waxaan halkaan u joognaa inaan caawinno. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto boggaaga - weyn ama yar - la xidhiidh kooxdayada taageerada. Waxaan jeclaan lahayn inaan caawinno.
Sida Loo Sameeyo Bogga Degitaanka WordPress ee Beaver Builder (5 Tallaabo)
Qalab cusub oo Google-ka ah ee 'Qaybaha Tafaariiqda Sare' ayaa daaha ka qaadaya raadinta alaabta si degdeg ah u koraysa
WP Engine vs Bluehost (Isbarbardhigga Martigelinta 2022)
Modula VS Envira Gallery: Waa kuwee Plugin Gallery WordPress ee ugu fiican?
Sida Loo Mideeyo WooCommerce Iyo Zapier
11-ka Sababood ee ugu Sarreysa ee lagu dooranayo Madal Martigelin la Maareeyay oo ay Diirada saartay Wakaalada